Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	30 Matshi 2020	• 14 Comments
Uhlaziyo lweCoronavirus: Khumbula xa ndatshoyo ukuba ayikapheli i-6 ka-Epreli (jonga apha umzekelo). Njengoko kwakuxelwe kwangaphambili, ukwandiswa kwamanyathelo kuyabhengezwa namhlanje. Yonke into kulula kakhulu ukuyibona nokuqikelela kuba sinikela ubungqina kwiskripthi esiyi-master. Nje ukuba uqonde le script iyintloko, unga […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 Matshi 2020	• 26 Comments
Kubalulekile ukuba sixoxe nge-Q Anon kwakhona, kuba uninzi lubonakala lukholelwa koko kutshiwo ziifayile ze-Q Anon. Bakholelwa ukuba kukho imeko enzulu ukuba uTrump ayicace. Isiteyitimenti sam yile: Kukho indawo enzulu ngakumbi ebandakanya uTrump kunye no-Q Anon. Umdlalo we […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	26 Matshi 2020	• 17 Comments
Kwinqaku le-NRC namhlanje kuyacaca ukuba ikakhulu amadoda kunye nabantu abadala babulawa yi-coronavirus. Isicatshulwa esivela kwinqaku: Ingxaki enkulu yeCovid-19 sisiphango se-cytokine, esinokuthi senzeke xa igingciyo yentsholongwane iba mandundu. Sisenzo esingqongqo esingalawulekiyo somzimba wokulwa amajoni omzimba ngokuchasene nenani elikhulu lentsholongwane, […]
Buyintoni na ubunyani bolawulo obusasazwa ngezobupolitika nakusasazo ngokudibeneyo nenkcaso elawulwayo? Qaphela uphawu lomnyama. Ngaba umnyama ngokufihlakeleyo ngumqondiso womyalelo wehlabathi elitsha? Ngaba umhlaba uzele ngumkhukula wecoronali njengakwimihla kaNowa? Yintoni evele kwakhona […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	25 Matshi 2020	• 17 Comments
Nangona uRobert Jensen ebonakala ukuba ufulathele amaqela aphambili kwezopolitiko, usengumlandeli omkhulu weTrump. Iividiyo zakhe ngoku zijongwa kakhulu, njengaleya yeenkwenkwezi entsha kwisiza; inenekazi elikholelwa kwii-UFOs nakwizangqa zezityalo: uJanet Ossebaard. Kulungile, ngokwayo […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	24 Matshi 2020	• 16 Comments
Xa kuqala unyaka ka-2020 ndaziva ukuba izakuba ngunyaka onzima. Ukubona imigca yokugqibela ukuya kwindawo ehleliyo ye-coronavirus covid-19 ngoku kunika ithemba lokuba iya kuphela kungekudala. Ngobusuku boNyaka oMtsha, ndibhale: “Ngokubhekisele kum, unyaka ka-2020 uya kuba ngunyaka wabadlwenguli kunye nomntu oxhalabisayo […]
ICovid-19 Janet Ossebaard (izangqa zezityalo, i-Ninefornews) i-coronavirus documentary (jonga ngezantsi) ngumgibe. Kuya kufuneka wazi ukuba i-IBM ye-Blue Blue supercomputer ebambe intshatsheli yehlabathi uKasparov nge-chess kwasekuqaleni kuka-1996 kunye neKhompiyutha kaGoogle iAlfum yeKhompyuter yabetha intshatsheli yehlabathi kumdlalo obunzima ngo-2016. Ukongeza, kuya kufuneka wazi ukuba […]
Ngokucacileyo i-coronavirus izisa ubunzima obukhulu eluntwini. Unokubona ukuba kuko konke ukuhlaselwa kwimidiya yoluntu kuye wonke ubani ozimisele ukuveza uluvo olwahlukileyo. Ungenzi mpazamo. Ngexesha elingaphezulu kweminyaka esi-7 bendibhalile, ndifumanise ukuba inani lamajoni aseburhulumenteni abeka iibhulethini zawo zebhokisi ebantwini kumajelo eendaba ezentlalo […]
Sinokulinda ukuvalwa ngokupheleleyo eNetherlands. Iintetho ezenziwe nguRutte kunye noKumkani uWillem Alexander ziyimpawu eludongeni kwaye ikakhulu zisebenzela ukukholisa abantu kwaye zinika umbono wokuba yonke into izakulunga. "Kungathatha ixesha elincinci", yenza njalo […]
«Ikhasi langaphambili - Ikhasi elilandelayo »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.477.144